Chelmo - Exclusive
Celebrity တွေရဲ့အမိုက်စား ၀ိတ်ချနည်းများ
အချိုစားသုံးခြင်းကိုလျော့ချရင် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်မြန်မြန် ကျနိုင်ပါတယ်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားမင်းသားချောလေး ၆ယောက်
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး သရုပ်ဆောင်အရမ်းကောင်းတဲ့ မင်းသား ၆ယောက်က ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ ?
၂၀၁၈ မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၅သန်းတန် Villa ၀ယ်ခဲ့တဲ့ IU
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရန်ဖြောင်းမြို့မှာ မနှစ်က တန်ဖိုးကြီးတဲ့ Villa ၀ယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး အဆိုတော် IU က မီဒီယာတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၉ခုနှစ်မှာ လူတိုင်းကြည့်သင့်တဲ့ ကိုရီးယား ဒရမ်မာ (၇) ကား
အခုချိန်ထိ ကိုရီးယား ဒရမ်မာ ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးထွက်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၉ မှာ လူတိုင်းကြည့်သင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား (၇) ကားရှိပါတယ်။
ဒရမ်မာအသစ်မှာ အတူတူပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းဟေကို နဲ့ ဂျိုဂျီဟွန်း
My Love From Another Star ကိုရိုက်ကူးတဲ့ ဒါရိုက်တာ Jang Tae Yoo က ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ “Hyena” ၀တ္ထုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားပြီး ဒရမ်မာ အနေနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်း ဖွန်လ ၁၉ရက်နေ့က သိရပါတယ်။
H1N1 ရောဂါလက္ခဏာနဲ့ ကူးစက်နှုန်း ရပ်တန့်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ?
H1N1တုပ်ကွေးရောဂါရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာဟာ တခြားရာသီတုပ်ကွေးတွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ အဖျားရှိတာ၊ နှာရည်ယိုတာ၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ ချွဲကျပ်နေတာ၊ ၀မ်းပျက်တာ၊ တုန်ချမ်းချမ်းတာ၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာ၊ ပျို့တာနဲ့အန်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ မှာ စတင်ပြသတော့မယ့် လီမင်ဟိုရဲ့ ဇာတ်ကားအသစ်
The King: The Eternal Monarch ၀ထ္ထုကို ၂၀၁၉ခုနှစ်ထဲမှာပဲ စတင်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင် Lee Min Ho ၊ Woo Do Hwan ၊ Kim Kyung Nam နဲ့ Kin Go Eun တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Kim Won Bin သရုပ်ဆောင်လောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတော့မှာလား?
သရုပ်ဆောင် ကင်ဝန်ဘင်း ဟာ သူရဲ့ အောင်မြင်မှုအရရှိခဲ့ဆုံး “The Man From Nowhere” ဇာတ်ကားကို ၂၀၁၀ ခုနစ်က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်ဇာတ်ကားမှာမှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိခဲ့တာ ၉နှစ် ကြာခဲ့ပါပြီ။
ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိနေတဲ့ Park Seo Joon ရဲ့ ဇာတ်ကားအသစ် “The Divine Fury”
နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် Park Seo Joon က ဇူလိုင်လထဲမှာ ထုတ်လွှင့်တော့မယ့် The Divine Fury ဇာတ်ကားမှာ MMA ရဲ့ လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦး ဇာတ်ရုပ်ကိုသာမက မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို လိုက်နှိမ်နှင်းတဲ့ ဖာသာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်
You TubeမှာTrending No 1 ဖြစ်နေတဲ့ Taylor Swift ရဲ့သီချင်းအသစ်
Taylor Swift ကတော့ သီချင်းအသစ်ထွက်လာတိုင်းကို ပရိသတ်အားပေးမှုအပြည့်အ၀ ရယူထားနိုင်တဲ့သူပါ။
ဘယ်လိုပုံစံမျိးပဲ ၀တ်ဝတ်လှတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အလှအပကတော့ ပရိသတ်တွေ သိတဲ့အတိုင်း ပုရိသတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ ပြောစမှတ်ပြုလောက်ပါတယ်။
EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. စစ်မှုထမ်းသွားရင် ပရိသတ်တွေ လွမ်းနေရမယ့် အချက်လေးတွေ
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လခန့်လောက်က EXO အဖွဲ့ဝင် Xiumin က သူရဲ့နောက်ဆုံး တစ်ကိုယ်တော် Fan Meeting မှာ စစ်မှုထမ်းရမယ့် အကြောင်းကို ရုတ်တရက်ပြောပြခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေနဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေ ၀မ်းနည်းလို့မဆုံးခင်မှာပဲ D.O. ကလည်း ဇူလိုင်(၁)ရက်နေ့မှာ စစ်မှုထမ်းရတော့မယ့်